ပျင်းရိခြင်းသည် သင့်အလုပ်မှာ ဒုက္ခပေးနေသလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ပျင်းရိခြင်းသည် သင့်အလုပ်မှာ ဒုက္ခပေးနေသလား
Posted by manawphyulay on Nov 1, 2012 in Business & Economics | 16 comments
အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သာ လိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ရရှိနိုင်ပြီး ထိုအရာများဖြင့် အခြားသူများရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းကူညီနိုင်ပါမည်။ ကျွန်မတို့အားလုံး အလုပ်လုပ်ကြမှသာ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှ လိုအပ်နေသူများကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့ ကူညီနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်လမ်းစ ရှာတတ်လျှင် ၀င်ငွေရနိုင်မည့် နည်းလမ်းမြောက်မြားစွာ ရှိပါသည်။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ အခြား သူများရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲမှ ငွေကို အားကိုးပြီး အသက်မရှင်ပါနှင့်။ ကျွန်မတို့အားလုံးတွင် မိမိရဲ့ စားဝတ်နေရေး အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် မှန်မှန်ကန်ကန် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ရန် တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ရန် ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ၀င်ငွေရဖို့ရန် မပျင်းမရိ နည်းလမ်းရှာပြီး တစ်ပါးသူများကို မမှီခိုဘဲ မိမိကိုယ် မိမိ ရပ်တည်နိုင်ရမည်။ သင်တစ်ခု သိထားဖို့ကတော့ အောင်မြင်မှု ဆိုသည်မှာ မိမိ၏ကိုယ်တွင်းမှ အစပြုပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်၏ ဆိုတဲ့ အမြင်ကို ထားရှိဖို့သာ လိုအပ်လှပါသည်။ သင့်အရည်အသွေးများကို အမြဲတိုးတက်မှုရှိနေစေရန် အမြဲဖန်တီးနေရမည်။ ပါးနပ်လိမ္မာစွာ အလုပ်လုပ်တတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ တူညီသော တစ်ချိန်တည်းတွင် အမှုသာ၍ ပြီးစီးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယခင် ကထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ သင်သည် သင့်ပြိုင်ဘက်ထက် ပိုမိုသာပြီး ဒီထက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် သင့်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အစွန်အဖျားရောက်နေသော နေရာမှ အချက် အချာကျသောနေရာသို့ လူအများက သင့်ထုတ်ကုန် ၀န်ဆောင်မှုတို့ကို တမ်းတရသော အနေအထားသို့ အမှန်တကယ် ရောက်လာမည် ဖြစ်ပေသည်။
လူတိုင်းပင် စိတ်ချမ်းသာမှုကို အလိုရှိကြသည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရမှ လူ့ဘ၀ရကျိုးနပ်မည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် စိတ်ချမ်းသာမှုတည်းဟူသော ပန်းတိုင်ဆီသို့ ရည်မှန်းသွားနေကြသည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကား နေရောင်ခြည်ထဲ၌ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် တောက်ပနေသော မြူမှုန်ကလေးများကို လက်ဖြင့် ဖမ်းခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ရနိုင်ရန် ခက်ခဲလှသည်ဟု လူတို့ယူဆဖွယ်ရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကို လိုချင်ကြသည်မှာ လူတိုင်းရဲ့စိတ်အတွင်းသန္တာန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုသည်မှာ စိတ်ချမ်းသာမှု ကို မရနိုင်လောက်အောင် မည်သည်က တားဆီးထားပါသနည်းဟူသော အဖြေကား ရလေပြီ။ ယင်းမှာ ပျင်းရိခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းသည် စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့် ဖီလာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိကြရလေသည်။ ပျင်းခြင်းသည် ပျော်ခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ငြီးငွေ့ခြင်းကို လူတို့သည် အပျော်အပါးနှင့် ဖြေရန် အားထုတ်တတ်ကြပါသည်။ အပျော်အပါးသည် ငြီးငွေ့ခြင်းကို ပပျောက်စေနိုင်သည့် ဆေးအစစ်အမှန် မဟုတ်ချေ။ အပျော်အပါးသည် တစ်ခဏတာမျှသာ ဖြေဖျော်မှုဖြစ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ် မဟုတ်သည်သာမက စိတ်နှလုံး မသာယာဖွယ်သော မကောင်းကျိုးများကိုလည်း ပေးတတ်သေးသည်။ ကျွန်မတို့သည် ငြီးငွေ့ခြင်းနှင့် ပျင်းရိခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှာသောအခါ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာ အချိန်ကို ဇယားချ၍ မသုံး တတ်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာ အချိန်ဇယားသည် ညီညာ မျှတမှု မရှိ၊ တစ်စုံတစ်ခုက လို၍ တစ်နေရာက ပိုနေလျှင် ထိုလိုသောအချိန်၊ ပိုသောအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အဖို့ ပျင်းရိခြင်းနဲ့ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်လာတတ်ပေသည်။
နေ့တဒူဝ ပုံမှန်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တွေပေါ်မှာ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ပျင်းမိသား မနှောဖြူရေ။
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ပျင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင် အလုပ်ရှာပြီးလုပ်နေလိုက်တော့မယ်ဗျာ။
တက်ကျမ်းတွေ ရေးကြတုံး ရောင်းကောင်းကြတုံးလားဟင်…
အော်ပီကျယ်တို့ အကြည်တော်တို့ ရေးတဲ့ ကျကျမ်းလေးဒွေက ပိုဖတ်ကောင်းသလားလို့…
ဟယ် ဒါဂျောင့် နင်မတိုးတက်ထှာ :harr:
ဟီး ဟုတ်တယ်.. ခုဆို ချောင်တဲ့ကားပဲ စောင့် စောင့်စီးနေလို့ ရုံးနောက်ကျတာ ခဏခဏပါပဲ။
စာတွေအများကြီးရေးထားတာတွေ့လို့ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားလိုက်ပါတယ် … ပျင်းလို့ပါ …
ကာတွန်းလေးတစ်ခုကို သတိရမိပါတယ် …
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အခက်ခဲဆုံးအလုပ်ကို အပျင်းဆုံးဝန်ထမ်းကို ခိုင်းပါသတဲ့ …
အပျင်းဆုံးလူက ဖြတ်ထိုးဥာဏ်အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းကို သိပါသတဲ့လေ …
ပျင်းတယ်ဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ လူတော့သက်သာသားဗျ ..
မိရွှေကြည်ကတော့ အမေ့ရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးပါ :harr:
ကျွန်တော်သည် လူပျင်းဖြစ်သည်ကို..၀န်ခံပါသည် ။
နောက်တစ်ကြိမ် ထပ် ဖတ်ဖို့ …
ပျင်းရိခြင်း ကတော့ အလုပ်မှာ ဒုက္ခမပေးပါဘူး။
အလုပ်ချိန်မှာ မန်းဂဇက် ရွာထဲ ဝင်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကဘဲ ဒုက္ခပေးနေတာ မနောရေ့။
ဟိ။ အရီးပြောသလိုပဲ။ ဘယ်သူဘာတွေ အသစ်တင်နေပြီလဲ စိတ်ရောက်နေလို့ အလုပ်တွင်ဘူး။
မမနောရေ ….. ပျင်းတာထဲမှာတော့ ညီမပါတယ် ……. ပျင်းတာ တော်တော်ဆိုးတာပဲနော် ….
တော်ကြာကန်ထုတ်လိုက်ရင် ဒါကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အလုပ် လုပ်မစားတတ်လို့ပါ။
အင်း.. မ မနောရေ…
Green Rose ကတော့ အလုပ်ထဲမှာရယ် အိမ်မှာရယ် ခွဲခြားမနေပါဘူး။ ပျင်းချင်တဲ့အချိန် ပျင်းချင်တဲ့နေရာမှာ ပျင်းတာပါပဲ။ အဲဒီ့မှာ weiwei ပြောတာလေးကိုသဘောကျမိသွားတယ်။ အပျင်းဆုံးလူက ဖြတ်ထိုးဥာဏ်အကောင်းဆုံးဆိုတာလေး မှန်တယ်ထင်တာပဲ.. ဟိ..
နောက်မှ မ မနော အကြံပေးထားသလို လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် လောလောဆယ်တော့ ပျင်းလို့ကောင်းတုန်းမို့..
ကိုခင်ခ … အလုပ်ရှာပြီးလုပ်ဖို့ကို ပျင်းနေတာ …
နေ့လည် ကျုရှင်တတ်မယ်ဆို အရမ်းကိုမသွားချင်တာ … နေပူပြီး … ပျင်းပြီး သင်တန်းရက်မမှန်ဘုး …
အပျင်းဆုံးလူက ဖြတ်ထိုးဥာဏ်အကောင်းဆုံးဆိုတာ သမီးလည်းထောက်ခံတယ် …